कामचट्का ज्वालामुखी - एक रोचक प्राकृतिक घटना
को कामचट्का प्रायद्वीप - हुन सक्छ कमसल मात्र आइसल्याण्ड र हवाई छ जो पृथ्वीमा ज्वालामुखियों मा अमीर ठाउँहरू मध्ये एक। प्रशान्त महासागर, तथाकथित "आगो को घन्टी" को यस क्षेत्रमा, सय एक भन्दा बढी छ सक्रिय ज्वालामुखियों , र तिनीहरूलाई लगभग 30 हालै मात्र woken छन्।
कामचट्का को ज्वालामुखियों, आज Sheveluch ज्वालामुखी, ज्वालामुखी Kambalny दक्षिण लागि, प्रायद्वीप को उत्तरी मा स्थित छ जो देखि मान्यता मान्य फारम 700-किलोमिटर लामो ज्वालामुखी बेल्ट। जोडदार vulkanizm कामचट्का छिमेकी एलेउटियन र Kurile द्वीप Arcs मा को रूप मा, यूरेशियन अन्तर्गत subduction प्यासिफिक प्लेट कारण tectonic थाली।
विगतमा धेरै हजार वर्ष भन्दा बढी त्यहाँ लगभग 30 भएको धेरै ठूलो (Plinian) eruptions, ताकि बाहिर magma को बारे मा 1 km3हालियो। यी डाटा अनुसार, आज कामचट्का - ठूलो विस्फोटक eruptions को उच्चतम आवृत्ति संग पृथ्वीमा ठाउँ।
कामचट्का सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखियों Klyuchevskoy Karimsky, Sheveluch र Nameless छन्।
कामचट्का ज्वालामुखी Klyuchevskoy - यूरेशिया मा सबै भन्दा ठूलो सक्रिय ज्वालामुखी - समुद्र स्तर माथि 4750 मिटर गर्न rises। उहाँले सिद्ध अविश्वसनीय सुन्दर कोन छ। यो ज्वालामुखी को उमेर बारेमा आठ हजार वर्ष छ। पहिलो फुट्ने काम 1697 Klyuchevskoy आज कामचट्का मा ज्वालामुखी अवलोकन थियो यो पर्यटकहरु संसारको सबैभन्दा सुन्दर ज्वालामुखियों को एक निकट हेर्न चाहने धेरै आकर्षित गर्छ। यो फुट्ने काम हरेक वर्ष हरेक5वर्ष औसत मा भयो, र कहिले काँही, र तिनीहरूले लगातार धेरै वर्ष लामो छन् हुन्छ। सबैभन्दा तिनीहरूलाई शक्तिशाली 1944-1945 मा भयो। Kliuchevskoi गतिविधि पनि विशेषता छ र "परजीवी" क्र्याटर, मुख्य देखि 8-25 मी मा स्थित।
Shiveluch ज्वालामुखी कामचट्का मा - सबैभन्दा सक्रिय र ठूलो आकारको ज्वालामुखियों को एक - सबैभन्दा शक्तिशाली eruptions अलग छ। यो Kliuchevskoi देखि 80 km स्थित छ। SHEVELUCH अन्तिम धेरै हजार वर्षसम्म गठन एक विनाशकारी हिमस्खलन मलबे परिणामस्वरूप, सबै भन्दा विनाशकारी जो सन् 1854 र 1956, को लाभा घरको छानो अधिकांश संकुचन गर्दा फिर्ता तिथि 60 प्रमुख eruptions, त्यहाँ गरिएको छ। कामचट्का यस ज्वालामुखी ज्वालामुखियों को एक समूह र Klyuchevskoy उहाँलाई 65 हजार। साल पर्छ।
ज्वालामुखी Karimsky - अपेक्षाकृत कम (1486 मिटर) र जवान (6100 साल) - सबैभन्दा सक्रिय। यस शताब्दीमा त्यहाँ 20 भन्दा बढी eruptions, र 1996 मा शुरू भयो र2वर्ष लामो अन्तिम थिए। फुट्ने काम Karymskii एक केन्द्रीय ज्वालामुखीको मुख घनघोर लाभा देखि bursts र खरानी उत्सर्जन सँगसँगै। कामचट्का Karimsky को ज्वालामुखी नियम, चमकिलो सूत्रहरू सधैं खुट्टा पुग्न छैन, कि त टाँसिएको erupted कि लाभा। पछिल्लो फुट्ने काम 8 मी स्थित एक पानी Karymskii लेक को फुट्ने काम, संग coincided। यो केवल 20 घन्टा लामो, तर छोटो समयमा प्रत्येक जो उचाइ 15 मिटर पुगन सुनामी छालहरू पछि थियो 100 पानी छप थियो। कारण फुट्ने काम Karymskoe ताल पानी धेरै ताजा र सफा थियो जो, दुनिया मा अम्लीय पानी संग एक प्रमुख प्राकृतिक जलाशय भएको छ।
कामचट्का ज्वालामुखी एक लोप ज्वालामुखी पत्थर को दक्षिणपूर्वी ढलान स्थित बेनाम। लाभा प्रवाह निशान यसको ढलान को शीर्ष मा पाउन सकिन्छ। यो एक ठूलो पुरातन ज्वालामुखी माथि गठन भएको थियो जुन एक सानो र जवान ज्वालामुखी (4700 साल) छ। मध्य-50s मा जो पछि नाल को आकार मा एक ठूलो ज्वालामुखीको मुख गठन भएको फुट्ने काम थियो। त्यतिबेलादेखि बेनाम कामचट्का सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखियों रूपमा बुझे। नयाँ लाभा घरको छानो अक्सर विस्फोटक गतिविधि र निम्त्याउँछ जुन ज्वालामुखीको मुख, भित्र बढ्दै pyroclastic प्रवाह। 2011 देखि एक ज्वालामुखी घरको छानो लगभग ज्वालामुखीको मुख भरिएको छ।
कसरी Fungi को प्रजाति बीच भेद गर्न खाद्य र खाने को नालायक छन्। मशरूम कसरी खाना पकाउनु
कलगीदार बाँदर: विशेषताहरु सामग्री घर
नपुंसकको - raptors को दुनिया मा सबै भन्दा राम्रो मछुवा छ
को Tver क्षेत्रमा Brosno ताल। ताल Brosno को रहस्य
स्तन क्यान्सर को मुख्य लक्षण सम्झना गर्न सक्दैन के हो?
वसापजनन अग्न्याशय: कारण, लक्षण र उपचार
जब र "अमर रेजिमेन्ट?" जसले आविष्कार
Panadol बच्चा - राम्रो febrifuge
थ्रेड जडानहरू र प्रकार